अचानक किन अमेरिका हानिए झरना थापा र छोरी सुहाना थापा – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/अचानक किन अमेरिका हानिए झरना थापा र छोरी सुहाना थापा
अचानक किन अमेरिका हानिए झरना थापा र छोरी सुहाना थापा
1,429 1 minute read
काठमाडौं- निर्देशक झरना थापा, अभिनेत्री सुहाना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थापा अमेरिका पुगेका छन् । सोमबार नै थापा परिवार अमेरिका पुगेका हुन् । सुहानाको अध्ययन र पारिवारिक भेटघाटका लागि उनीहरु अमेरिका गएको बताइएको छ ।
उनीहरुको बसाई एक महिनाको हुनेछ ।अमेरिकामा ‘ए मेरो हजुर ४’ को एक गीत खिच्ने तयारी समेत रहेको बताइएको छ । यसका लागी केही समय पछि अनमोल पनि अमेरिका जाने बताइएको छ । यसअघि फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ को एक गीत र केही प्रतिशत छायांकन अमेरिकामा नै गरिएको थियो ।
‘ए मेरो हजुर ४’ मा पनि अनमोल र सुहानाले जोडी बाधेका छन् । ‘ए मेरो हजुर ४’फिल्मको एक महत्त्वपूर्ण सिनमा अभिनेता अनमोल केसी गम्भीर विरामी भएको देखिनुपर्ने छ । यसका लागि उनले १० केजी तौल घटाउनुपर्ने भएकाले पनि फिल्मको छायांकन तत्काललाई रोकिएको बताइएको छ ।
आज नायिका केकी अधिकारीको जन्मदिन, कती बर्षकी भइन् उनी ?
सुष्माको खुलासा ! मेरो शरिरमा सलमान खानको तस्विर अंकित ट्याटु छ,रे । हेरौ भिडियो
धमला पत्नी एलिजाले एस्तो फो’टोशुट गरेपछि आ’त्तिय धमला ,
गुडिया जस्तै देखिने २६ वर्षिया मोडल (हेर्नुहोस फोटोहरु)